Wasiirkii Hore Ee Maaliyadda Somaliland Mr. Cawil Oo Si Qarsoodi Ah Uga Baxay Dalka | Araweelo News Network (Archive) -
Wasiirkii Hore Ee Maaliyadda Somaliland Mr. Cawil Oo Si Qarsoodi Ah Uga Baxay Dalka
Hargeysa(ANN) Wasiirkii hore Maaliyadda Somaliland Cawil Cali Ducaale ayaa si qarsoodi ah dalka uga baxay doraad sidaana waxa shebekada wararka ee Araweelonews u xaqiijiyay saraakiil ka tirsan xisbiga mucaaridka UDUB.“waxa lagu qoray $ 500 (shan boqol ) oo dollar
oo qaadhaan ah, lacag xisbiga loo ururinayay. Kadibna waxanu ku war helay inuu dhoofay, mana garanayno meel uu tegey. Laakiin inuu Nairobi u baxay ayaan filayaa.” Sidaa waxa yidhi sarkaa ka tirsan xisbiga UDUB oo codsaday in aan magaciisa la sheegin, isagoo la hadlayay shebekada Araweelonews.
Wararka qaar ayaa sheegaya inuu Mr. Cawil socdaalkiisu ku wajahan yahay dhinaca Koonfurta Soodaan ee Juba, balse waxa jira warar kale oo sheegaya inuu ka hor inta aanu halkaa tegein sii marayo dhinaca dalka Kenya ee Nairobi.
Mr. Cawil Wararka Wasiirkii hore ee Maaliyadda Somaliland Mr. Cawil Cali Ducaale si dhab ah looma oga inay socdaalkiisa ka war hayso Xukuumadda Somaliland iyo inay la socdaan Hay’addaha hanta dhawrka guud ee qaranku, maadaama uu Mr. Cawil ka mid ahaa masuuliyiin ka tirsan xukuumaddii hore oo ay ku socotay baadhis la xidhiidha hanta lunsi iyo wax isdaba marin mudadii siddeeda sannadood ee ay xukunka hayeen. Hantidhawrka guud oo aanu isku daynay inuu la socdo safarka wasiirkii hore ee Maaliyadda ayaanay noo suurta gelin.
Dhinaca kale socdaalka Mr. Cawil ayaa kusoo beegmay, iyadoo ay Xukuumadda cusubi golaha wakiiladda Somaliland u gudbisay miisaanayidii u horaysay oo 70% ka baddan miisanayidii ugu danbaysay ee Xukuumaddii Rayaale, taas oo uu Wasiir Maaliye ka ahaa Cawil sideeddii sannadood ee u danbeeyay.